Mandray anjara amin'ny fametraham-pialana lehibe izao ny fandaharana amin'ny fahitalavitra ankafizin'ny Brits
Ny fanakatonana marobe sy ny fiasana any an-trano dia nahatonga ny Brits maro hanana fotoana bebe kokoa amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra ary ankehitriny, ny fikarohana vaovao avy amin'ny FutureLearn dia manambara ny maha-zava-dehibe azy ireo amin'ny zavatra tian'ny olona hianarana sy ny lalan'ny asa sy ny safidiny.
Miaraka amin'ny saika ny roa ampahadimin'ny Brits (39%) no nahasarika an'i Bridgerton mendrika ho binge noho ny literatiora mahazatra azy, Squid Game noho ny famahana olana mahavariana (33%) ary After Life noho ny fomba fiasany amin'ny alahelo (40%), mety hisy bebe kokoa. ho an'ny tombontsoan'ny firenena sy ny zava-bitany eo amin'ny sehatry ny asa. Moa ve ny fandaharana amin'ny fahitalavitra izay mamely an'i UK dia tena milaza bebe kokoa momba ny Brits mihoatra noho ny noheveriny, ary mety ho izany ve no anton'ny fametraham-pialana lehibe araka ny fantatsika amin'izao fotoana izao?
Raha mbola mitohy manaikitra ny Fametraham-pialana Lehibe ary mahatsapa fisalasalana momba ny lalan'ny asany ny Brits, ny fikarohana vaovao avy amin'ny sehatra fanabeazana an-tserasera lehibe indrindra any UK, FutureLearn.com, dia mampiseho ny fomba mety ho valin'ny tanjon'ny asantsika ny fandaharana amin'ny fahitalavitra.
Ny psikology momba ny fanabeazana, Dr Kairen Cullen, dia manazava ny antony mahatonga ny fisarihana amin'ny singa sasany amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra dia afaka manasongadina ny fomba ahafahan'ny tsirairay mivoatra amin'ny lalan'ny asa sasany, manampy ireo olona tsy mahafantatra hoe aiza no hanombohana hanao dingana voalohany amin'ny fanovana asa.
Nanjary nalaza ny seho toy ny Sex Education noho ny fomba fijerin'izy ireo lohahevitra toy ny firaisana ara-nofo sy ny maha-lahy na maha-vavy ary manamora ny firesahana azy ireo araka ny filazan'ny 36%-n'ny Brits. Ny lohahevitra tahaka izao dia hita ao amin'ny asan'ny mpitsabo ary koa ny fampianarana toy ny Global Intimacies: Sex, Power, Gender and Migration.
Indraindray dia tsy dia mazava loatra ny fiantraikan'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra tianao indrindra, araka ny hita ao amin'ny ampahadimin'ny Britanika mijery Killing Eve satria mahatonga azy ireo te hitety an'izao tontolo izao izany. Miaraka amin'ny fampianarana Intro ho an'ny Travel and Tourism an'i FutureLearn, afaka manatanteraka izany nofinofy izany ny Brits.
Ny fankafizana ny tontolon'ny fantasy izay ametrahana ny Game of Thrones (68%) dia mampiseho fahaiza-manao akademika tsy dia mahazatra toy ny famokarana. Ny fahalianana tonga lafatra amin'ny asa amin'ny famokarana sarimihetsika, vokatr'izany dia maka Jiro, Fakan-tsary, Solosaina - Hetsika! Ny fomba hanovan'ny Teknolojia nomerika ny Sarimihetsika, ny fahitalavitra ary ny lalao dia mety ho dingana voalohany hidirana amin'io sehatra io.
Miaraka amin'ny tokantrano manodidina ny 27 tapitrisa any UK manana fahitalavitra*** raha tsy hilaza afa-tsy ny isan'ny finday sy tablette izay azon'ny olona ijerena fandaharana amin'ny fahitalavitra ankehitriny, mazava ny fiantraikan'ny fandaharana amin'ny fiainana andavanandro. Avy amin'ny safidy lamaody ka hatramin'ny mozika tianay dia misy zavatra ho an'ny rehetra, ao anatin'izany ny roa ampahadimin'ny Brits izay mijery ny Doctor Who mba hijery ny habakabaka ary noho izany dia mety hahita asa amin'ny Astrobiology manatanteraka amin'ny alàlan'ny fianarana ny fiainana amin'ny Mars.
Astrid deRidder, talen'ny votoaty ao amin'ny FutureLearn, dia nilaza hoe: "Ao amin'ny FutureLearn, ny iraka ataontsika dia ny hanova ny fidirana amin'ny fampianarana. Ireo tetikasa tahaka ity dia manasongadina ny fomba ifanarahana ny fanabeazana, ny tombontsoa manokana ary ny fiainana andavan'andro ary ny fomba ahafahan'ny singa tsirairay misy fiantraikany amin'ny hafa. Amin'ny fampifandraisana ireo fandaharana amin'ny fahitalavitra ankafizin'ny olona sy ny antony mahasarika azy ireo amin'ny taranja mety sy ny lalan'ny asa dia mampiseho ireo olona azony ampiofanina sy miasa amin'ny faritra tena itiavany azy.
Dr Kairen Cullen, mpitsabo aretin-tsaina (fanabeazana) voasoratra anarana: "Ny kolontsaina malaza, araka ny aseho amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra, dia matetika hita taratra amin'ny safidy fianarana izay mandrisika ny tsirairay sy amin'ny safidy momba ny fanabeazana, izay ataon'izy ireo. Ny fomba fijerena fahitalavitra isan'andro ataon'ny olona dia manome fomba fijery mahasoa amin'ny safidy asa mety ho azy ireo. Ny halehiben'ny fanasongadinan'ireo safidy ireo ny tombontsoan'ny olona sy ny asa ary ny asa tiana dia hiovaova eo amin'ny tsirairay, saingy fanazaran-tena mahasoa izany mba hampamirapiratra ny safidin'ny fialam-boly manokana sy hampiasana izay hitantsika amin'ny fandinihana ny fianarana samihafa sy ny safidy momba ny asa ho avy. "
More on: Tourism | teknolojia | fanabeazana
Previous Ny anjara asan'ny fiovaovan'ny toetr'andro izao amin'ny fitomboan'ny tahan'ny allergy
Manaraka Ny trano Champagne Frantsay dia mankalaza ny taona voarakitra ho an'ny bubbly